seven seas ministries, apostle audio
seven seas ministries, kyle tait
နိ​ဒါန်း ကမ္ဘာ​ဦး​ကျမ်း​တွင်​ကမ္ဘာ​၏​မူ​လ​အ​စ​နှင့် စပ်​ဆိုင် သော​အ​ကြောင်း​များ​ကို​ဖော်​ပြ​သည်။ ဤ​ကျမ်း တွင်​စကြ​ဝ​ဠာ​ကို​ဖန်​ဆင်း​ပုံ၊ လူ​ဟူ​၍​ပေါ်​ပေါက် လာ​ပုံ၊...
နိ​ဒါန်း ရှင်​မ​ဿဲ​ပြု​စု​သည့်​သ​တင်း​ကောင်း​တွင်​ဓမ္မ ဟောင်း​ကျမ်း​အ​ရ​ဘု​ရား​သ​ခင်​ထား​တော်​မူ​သော က​တိ​တော်​နှင့်​အ​ညီ​ကြွ​လာ​မည့်​ကယ်​တင်​ရှင်​မှာ...
နိ​ဒါန်း။ ဆာ​လံ​ကျမ်း​သည်​သမ္မာ​ကျမ်း​စာ​၏​သီ​ချင်း​စာ​အုပ်​နှင့်​ဆု​တောင်း​စာ​အုပ်​ဖြစ်​သည်။ ယင်း​တို့​ကို​ခေတ်​ကာ​လ​အ​ဆက်​ဆက်​က​ပ္ဂိုလ်​တို့​ရေး​သား​ပြု​စု​ပြီး...
20180705 Session2Andy Byrd Hunger For The Word
Andy Byrd speaking on being hungry for the Word of God.
Topics: Bible, Hunger, God
01 Trust Issues
How to Overcome trust issues with God
003 Dr. Michael Heiser Faith & Aliens
Topics: paranormal, faith, aliens, ET, god, christian, bible
01012 GENESIS 9
Telugu Christian Apologetics Church
Topic: Telugu Bible STudy
Icelandic Audio Bible - Hljóðbók - Biblian
Icelandic Audio Bible - Hljóðbók - Biblian Gospel and Acts only.
Topic: islensk islensku biblian bible icelandic
The Bible read by Sir Laurence Olivier
Topics: Laurence Olivier, Bible, Audio book
Tutors for Christ ministry radio broadcast. Please see: http://www.tutorsforchrist.org for more information.
Topics: Tutors for Christ, Jean Eason, Orpah Hicks, Jehovah's witness, Jesus Christ, Bible Study, Religion,...
Maria Valtorta AUDIO 5
Topics: bible, sspx, catholic, mystic
Panjabi Bible Stories
Topic: Panjabi Bible Stories
1 SE Reflection 1
Reflection SUNDAY BEFORE EASTER: THE PASSAGE During the next eight days we will undertake an exploration of the inner processes related to the esoteric meaning of Easter. The narratives on which we base this come from The Gospel of the Holy Twelve by Gideon Jasper Ouseley. During sleep, our 'night consciousness’ can lift itself into the domain of the soul, the invisible realm of the primordial ideas from which the sacred scriptures of humanity originate. We therefore recommend that at night...
Topics: Easter, resurrection, Jesus, bible, gospel, gospel of the holy twelve, spiritual easter
June 27, 2018 - My Bible Verse of the Day
by Seven Seas Ministries, Apostle Audio
Bible Verse of the Day Seven Seas Ministries Pastor Curt & Pastor Ellie Voiceover: Kyle Tait, Apostle Audio To sign up for daily verses and uplifting messages in your inbox, go to MyBibleVerseOfTheDay.org . And for more on Apostle Audio, visit ApostleAudio.com
Topics: Bible Verse of the Day, Bible Verse, Kyle Tait, Pastor Curt, Pastor Ellie, Apostle Audio,...
March 5, 2018 - My Bible Verse of the Day
Topics: Bible Verse of the Day, Bible Verse, Kyle Tait, Pastor Curt, Pastor Ellie, Apostle Audio
နိဒါန်း ရှင်ယောဟန်ပြုစုသည့်သတင်းကောင်းတွင်သခင် ယေရှုသည် "လူဇာတိကိုခံယူကာငါတို့ထံတွင် စံနေတော်မူသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားလေသည်။ ထိုကျမ်းကိုပြုစု...
နိ​ဒါန်း ဟေ​ဗြဲ​သြ​ဝါ​ဒ​စာ​သည်​တိုက်​ခိုက်​ထိုး​နှက်​မှု ကြီး​မား​လာ​သ​ဖြင့်​ခ​ရစ်​ယာန်​ဘာ​သာ​ကို​စွန့် လွှတ်​ခါ​နီး​အ​ခြေ​အ​နေ​သို့​ရောက်​ရှိ​နေ​သည့်...
Thoughts During the Lord's Supper - 20140928
The Lord's Supper - an ordinance of the Christian Life. Some thoughts for you to consider during your participation in the Lord's Supper. Presented at Grace Bible Church Tulsa, OK More messages like this are available at http://www.grace4u.org/thoughts-for-the-lords-supper/
Topics: tulsa bible church, grace bible church, bible church, baptist, bible, christian counseling,...
March 9, 2018 - My Bible Verse of the Day
by Seven Seas Ministries; Kyle Tait
Bible Verse of the Day Seven Seas Ministries To sign up for daily verses and uplifting messages in your inbox, go to MyBibleVerseOfTheDay.org. And for more on voice actor Kyle Tait, visit HearKyleTait.com
Topics: Bible Verse of the Day, Bible Verse, Kyle Tait, Pastor Curt, Pastor Ellie
June 26, 2018 - My Bible Verse of the Day
နိဒါန်း ရှင်​ပေါ​လု​သည်​ရော​မ​မြို့​သို့​သွား​ရောက်​ရန် အ​ကြံ​အ​စည်​ရှိ​သည်​အ​တိုင်း​ကြို​တင်​ပြင်​ဆင် သည့်​အ​နေ​ဖြင့် ရော​မ​သြ​ဝါ​ဒ​စာ​ကို​ရေး​သား ခြင်း​ဖြစ်​၏။...
နိ​ဒါန်း `တ​ရား​ဟော​ရာ​ကျမ်း' သည်​ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး သား​တို့​တော​ကန္တာ​ရ​ကို​ဖြတ်​သန်း​လာ​ခဲ့​သော ခ​ရီး​ရှည်​အ​ဆုံး​၌ ခါ​နာန်​ပြည်​သို့​ဝင်​ရောက် သိမ်း​ယူ​ခါ​နီး​အ​ချိန်၊...
နိ​ဒါန်း ဣ​သ​ရေ​လ​နိုင်​ငံ​တွင်​တ​ရား​သူ​ကြီး​များ ခေတ်​မှ ဘု​ရင်​အုပ်​စိုး​သည့်​စ​နစ်​သို့​ကူး​ပြောင်း သော​သ​မိုင်း​ကာ​လ​ကို ဓမ္မရာ​ဇ​ဝင်​ပ​ထ​မ...
နိဒါန်း တမန်တော်ဝတ္ထုသည်ရှင်လုကာပြုစုသည့် သတင်းကောင်း၏အဆက်ဖြစ်သည်။ တမန်တော် ဝတ္ထု၏အဋ္ဌိကရည်ရွယ်ချက်မှာ တပည့်တော် ဦးတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်၏...
နိ​ဒါန်း ဟေ​ရှာ​ယ​ကျမ်း​စောင်​ကို ခ၊ မ ရှစ်​ရာ​စု​နှစ်​ဝက်​နောက်​ပိုင်း​၌ ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​တွင်​နေ​ထိုင်​သော​ပ​ရော​ဖက်​ကြီး​တစ်​ပါး​၏​နာ​မည်​ကို​အ​စွဲ​ပြု​၍...
နိ​ဒါန်း ယော​ရှု​မှတ်​စာ​သည်​မော​ရှေ​အား​ဆက်​ခံ​သူ ယော​ရှု​ခေါင်း​ဆောင်​၍ ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား တို့​ခါ​နာန်​ပြည်​ကို​ဝင်​ရောက်​တိုက်​ခိုက်​သိမ်း​ယူ...
နိ​ဒါန်း ရှင်​လု​ကာ​ပြု​စု​သည့်​သ​တင်း​ကောင်း​တွင်​သ​ခင် ယေ​ရှု​အား​ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​၏​ကယ် တင်​ရှင်​အ​ဖြစ်​ဖြင့်​လည်း​ကောင်း၊ မ​နု​ဿ​လူ​သား...
နိ​ဒါန်း ပ​ရော​ဖက်​ယေ​ရ​မိ​သည်​ခ​ရစ်​တော်​မ​ပေါ် ထွန်း​မီ​ခု​နစ်​ရာ​စု​နှစ်​နောက်​ပိုင်း​နှင့် ခြောက် ရာ​စု​နှစ်​ရှေ့​ပိုင်း​ကာ​လ​တွင်​ကြာ​မြင့်​စွာ...
Talk on the book of Psalms
နိ​ဒါန်း ဓမ္မရာ​ဇ​ဝင်​တ​တိ​ယ​စောင်​သည်​ပ​ထ​မ​စောင် နှင့်​ဒု​တိ​ယ​စောင်​တို့​တွင် မှတ်​တမ်း​တင်​ခဲ့​သော ဣ​သ​ရေ​လ​အ​မျိုး​သား​တို့​၏​ဘု​ရင်​များ သ​မိုင်း​၏​အ​ဆက်​ဖြစ်​သည်။...
နိ​ဒါန်း ဓမ္မရာ​ဇ​ဝင်​ဒု​တိ​ယ​စောင်​သည် ဓမ္မရာ​ဇ​ဝင် ပ​ထ​မ​စောင်​၏​အ​ကြောင်း​ဆက်​ဖြစ်​၍ ရှင်​ဘု​ရင် ဒါ​ဝိဒ်​၏​နန်း​စံ​သ​မိုင်း​ဖြစ်​သည်။ ဒါ​ဝိဒ်​သည်...
နိ​ဒါန်း ကော​ရိန္သု​သြ​ဝါ​ဒ​စာ​ပ​ထ​မ​စောင်​ကို​တ​မန် တော်​ရှင်​ပေါ​လု​ရေး​သား​ရ​သည့်​အ​ကြောင်း​မှာ ကော​ရိန္သု​မြို့​၌​မိ​မိ​တည်​ထောင်​ခဲ့​သည့်​အ​သင်း တော်​တွင်...
နိ​ဒါန်း ရှင်​ပေ​တ​ရု​သြ​ဝါ​ဒ​စာ​ပ​ထ​မ​စောင်​သည် အာ​ရှ​မိုင်း​နား​ဒေ​သ​မြောက်​ပိုင်း​တွင် ပျံ့​နှံ့​နေ ထိုင်​လျက်​ရှိ​သည့်​ခ​ရစ်​ယာန်​များ​ထံ​သို့​ရေး...
Think on the Lord's Supper - 24 March 2013
Thoughts on The Lord's Supper - 24 March 2013 - Avery Boyd The Lord's Supperan ordinance of the Christian Life. We present some thoughts for your consideration. More messages are available at http://www.grace4u.org
Topics: Apostle Paul, lords supper, tulsa bible church, expository teaching, christian living, grace bible...
နိ​ဒါန်း တ​ရား​သူ​ကြီး​မှတ်​စာ​သည်​ဣသ​ရေ​လ​သ​မိုင်း တွင် လူ​တို့​တ​ရား​လက်​လွတ်​ပြု​မူ​ကြ​သည့်​ခေတ် အ​ခါ​က​ဖြစ်​ပျက်​သည့်​အ​ကြောင်း​အ​ရာ​များ...
နိဒါန်း ရှင်မာကုခရစ်ဝင်တည်းဟူသောရှင်မာကုပြုစုသည့် သတင်းကောင်း တွင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာမှာ ဘုရားသခင်၏သားတော် သခင်ယေရှု၏အကြောင်း သတင်းကောင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းကျမ်းဦး၌ဆိုထားသည်။...
Thoughts on the Lord's Supper - 17 March 2013
Thoughts on the Lord's Supper - 17 March 2013 - Kevin Johnson The Lord's Supper - an ordinance of the Christian Life. We present some thoughts for your consideration. More messages are available at http://www.grace4u.org
နိ​ဒါန်း ဣ​သ​ရေ​လ​နိုင်​ငံ​နှစ်​နိုင်​ငံ​တို့​၏​သ​မိုင်း​ကို​ ဓမ္မ ရာ​ဇ​ဝင်​တ​တိ​ယ​စောင်​တွင်​တင်​ပြ​ခဲ့​ရာ​မှ ဓမ္မ ​ရာ​ဇ​ဝင်​စ​တု​တ္ထ​စောင်​တွင်​ဆက်​၍​တင်​ပြ​ခြင်း...
နိ​ဒါန်း ရာ​ဇ​ဝင်​ချုပ်​ပ​ထ​မ​စောင်​နှင့်​ဒု​တိ​ယ​စောင် သည် ဋ္ဌမ္မ​ရာ​ဇ​ဝင်​ကျမ်း​များ​ထဲ​တွင်​မှတ်​တမ်း တင်​ထား​သော​အ​ဖြစ်​အ​ပျက်​များ​ကို​များ သော​အား​ဖြင့်...
by Celestial Sanctum Parish
A series based on the gospel of Christ. Inspired by an old song composition by the CCC choir Army Baracks in Lagos Nigeria. Please listen and share.
Topics: Jesus, Jesus Christ, son of God, gospel, bible, matthew, mark, luke, john, believe, God, holy...
နိ​ဒါန်း ရှင်​ယာ​ကုပ်​သြ​ဝါ​ဒ​စာ​သည်​ကမ္ဘာ​အ​ရပ်​ရပ် တွင်​ပျံ့​နှံ့​လျက်​ရှိ​သော ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​လူ​စု တော်​ဝင်​အ​ပေါင်း​တို့​ထံ​သို့​ပေး​ပို့​သည့်​စာ ဖြစ်​သည်။...
by Seven Seas Ministries, Kyle Tait
နိ​ဒါန်း ဖိ​လိပ္ပိ​သြ​ဝါ​ဒ​စာ​သည်​ဥ​ရော​ပ​တိုက်​တွင် ရှင်​ပေါ​လု​အ​ဦး​ဆုံး​တည်​ထောင်​ခဲ့​သည့်​ဖိ​လိပ္ပိ မြို့​အ​သင်း​တော်​သို့ ရှင်​ပေါ​လု​အ​ကျဉ်း​ခံ​နေ...
နိ​ဒါန်း ရှင်​ယော​ဟန်​သြ​ဝါ​ဒ​စာ​ပ​ထ​မ​စောင်​တွင် ရည်​ရွယ်​ချက်​(၂)​ခု​ရှိ​၏။ ယင်း​ရည်​ရွယ်​ချက် များ​မှာ (၁) စာ​ဖတ်​သူ​တို့​အား​ဘု​ရား​သ​ခင် နှင့်​လည်း​ကောင်း၊...
20140615 1 John511 13
Sermon on 1 John 5:11-13
Topics: sermon, eternal security, 1 John, Bible
နိဒါန်း သက်​သာ​လော​နိတ်​မြို့​သည်​ရော​မ​နိုင်​ငံ​လက် အောက်​ခံ​မာ​ကေ​ဒေါ​နိ​နယ်​ပယ်​၏​မြို့​တော် ဖြစ်​သည်။ ရှင်​ပေါ​လု​သည်​ဖိ​လိပ္ပိ​မြို့​မှ​ထွက်...
နိ​ဒါန်း ရာ​ဇ​ဝင်​ချုပ်​ဒု​တိ​ယ​စောင်​သည်​ပ​ထ​မ စောင်​၏​အ​ဆက်​ဖြစ်​၏။ ရှော​လ​မုန်​မင်း​၏​နန်း သက်​အ​ကြောင်း​ကို​ဖော်​ပြ​ပြီး​နောက်​ရှော​လ​မုန်...
နိ​ဒါန်း ခ​ရစ်​တော်​မ​ပေါ်​မီ ၅၈၆ ခု​နှစ်​တွင်​ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြို့​ကျ​ဆုံး​ပြီး​ချိန်​ကာ​လ​၌​ပ​ရော​ဖက်​ယေ​ဇ​ကျေ​လ​သည် ဗာ​ဗု​လုန်​ပြည်​တွင်...
Thoughts During the Lord's Supper - GBC August 25, 2013
The Lord's Supper - an ordinance of the Christian Life. We present some thoughts for your consideration. Grace Bible Church, Tulsa, OK More messages are available at http://www.grace4u.org
Topics: postle Paul, lords supper, tulsa bible church, expository teaching, grace bible church, christian...
နိ​ဒါန်း တိ​မော​သေ​သည်​အာ​ရှ​မိုင်း​နား​ဒေ​သ​တွင် ကြီး ပြင်း​လာ​သော​ခ​ရစ်​ယာန်​လူ​ငယ်​တစ်​ဦး​ဖြစ် သည်။ အ​မိ​မှာ​ယု​ဒ​လူ​မျိုး၊ အ​ဖ​မှာ​ဂ​ရိ​လူ မျိုး​ဖြစ်​၏။...
နိ​ဒါန်း ရှင်​ပေါ​လု​ရေး​သား​သော​ကော​လော​သဲ​သြ​ဝါ​ဒ စာ​သည် ရော​မ​ပိုင်​အာ​ရှ​ဟု​ခေါ်​သော​နယ်​ပယ်​ရှိ ဧ​ဖက်​မြို့​၏​အ​ရှေ့​ဘက်​၌​တည်​ရှိ​သည့် ကော​လော...
2016 Sunday Mornings
Messages from our Sunday morning church services. Learn more at "http://www.reliance-church.com"
Topics: Reliance, Church, Saint, St Petersburg, FL, Florida, SPHS, Christian, Evangelical, Baptist, God,...
Thoughts During the Lord's Supper - GBC August 18, 2013
Topics: Apostle Paul, lords supper, tulsa bible church, expository teaching, grace bible church, christian...
Galmey Community Bible Church May 17th Message
Thoughts During the Lord's Supper - 20131103
The Lord's Supper - an ordinance of the Christian Life. We present some thoughts for your consideration. Presented at Grace Bible Church Tulsa, OK More messages like this are available at http://www.grace4u.org/thoughts-for-the-lords-supper/
နိ​ဒါန်း မိုး​ကောင်း​ကင်​နှင့်​ကမ္ဘာ​မြေ​ကြီး​ပေါ်​ရှိ​အ​ဖန် ဆင်း​ခံ​ဟူ​သ​မျှ​အား ခ​ရစ်​တော်​၏​ဦး​စီး ခေါင်း​ဆောင်​မှု​အောက်​တွင်​ရောက်​ရှိ​စေ​ရန် ဘု​ရား...
0073DIMENSÕ ES DA PESSOA DE JESUS
by Igreja Batista Moriá de Caucaia
Topics: bíblia, bible, igreja, church
The Lord's Supper - 6/1/2014 GBC
Thoughts During the Lord's Supper - 1 June 2014 The Lord's Supper - an ordinance of the Christian Life. Some thoughts for you to consider during your participation in the Lord's Supper. Presented at Grace Bible Church Tulsa, OK More messages like this are available at http://www.grace4u.org/thoughts-for-the-lords-supper/
Myanmar Audio Bible Genesis Chapter (15) ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး (၁၅)
နိ​ဒါန်း တိ​တု​သည်​ဂ​ရိ​အ​မျိုး​သား​ဖြစ်​ပြီး​ခ​ရစ် ယာန်​ဘာ​သာ​သို့​ကူး​ပြောင်း​၍ ရှင်​ပေါ​လု​၏ သာ​သ​နာ​ပြု​လုပ်​ငန်း​တွင်​ရှင်​ပေါ​လု​၏​လုပ်...
Total Views 6,500,733,422
Total Items 7,803,179